Fiainan-tsi-hita - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiainan-tsy hita)
Ny fiainan-tsi-hita na fitoeran' ny maty dia toerana misy ny olona na ny zava-manana aina hafa aorian' ny fahafatesanan araka ny finoana sy ny fivavahana maro. Amin' ny heviny mifintina dia toerana anasaziana mandrakizay ny olona voaozona ny fiainan-tsi-hita (ka atao hoe helo na afobe koa).
Fidinan'i Jesoa tany amin'ny fiainan-tsi-hita
Ny foto-pampianarana sy ny tenim-pinoana ao amin' ireo fivavahana mônôteista momba ny fisian' ny fiainan-tsy hita dia nateraky ny foto-kevitra mitaky ny fanamarinana ny fahamarinan' Andriamanitra amin' ny fitsarana, izay misy ifandraisany amin' ny fahatsapan' ny olona ny fisian' ny asa sy toetra ratsy izay tsy ampy sazy nandritra ny fiainan' izay nanatanteraka izany asa ratsy izany na nanana izany toetra ratsy izany.
Niely tamin' ny Andro Taloha sady hita amin' ny ankamaroan' ny fivavahana eto amin' izao tontolo izao ny finoana ny fiainan-tsi-hita. Ny famaritana ny fiainan-tsi-hita dia miovaova arakaraka ny fivavahana ary indraindray anaovana fivoasana samihafa ao amin' ny fivavahana iray. Ao amin' ny bodisma, ohatra, dia toetran' ny fanahin' ny olona itambesaran' ny faniriana sy ny fahamaizam-po ny fiainan-tsi-hita.
1.1 Fiainan-tsi-hita na fitoeran' ny maty
2 Fiainan-tsi-hita ao amin' ny fedrà grika
3 Fiainan-tsi-hita ao amin' ny jodaisma
4 Fiainan-tsi-hita ao amin' ny fivavahana kristiana
Ao amin' ny Baiboly amin' ny teny malagasy no ahitana ny teny hoe fiainan-tsi-hita na fitoeran' ny maty na helo.
Fiainan-tsi-hita na fitoeran' ny matyModifier
Ny teny hoe fiainan-tsi-hita na fitoeran' ny maty dia nandikana ao amin' ny Baiboly malagasy ny teny latina hoe infernus izay midika ara-bakiteny hoe "izay ao ambany". Ny teny hoe helo kosa dia fanagasiana ny teny anglisy hoe hell izay mitovy dika amin' ny teny latina hoe infernus. Ny mpanoratra ao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia mampiasa ny tsipelina hoe "fiainan-tsy hita" fa tsy "fiainan-tsi-hita".
Ny hoe helo dia fanagasiana ny teny anglisy hoe hell, izay nandikana ao amin' io fiteny io ny teny hebreo hoe שְׁאוֹל / sheol sy ny teny grika hoe Γέεννα / gehenna (avy amin' ny teny hebreo hoe גֵי־הִנֹּם‎ / ge-Hinnom) sy Τάρταρος / Tártaros. Tsy ny fiainan-tsi-hita manontolo anefa no tondroin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy amin' ny hoe helo fa "toerana [...] inoan' ny mpivavaka kristianina ho fitoeran' ireo ratsy fanahy teto an-tany ka ijaliany amin' ny tsy fahitany an' Andriamanitra". Ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy kosa mampiasa ny hoe afobe.
Fiainan-tsi-hita ao amin' ny fedrà grikaModifier
Ao amin' ny Hadesin' ny fedràn' ny kolontsaina grika sy rômana no itoeran' ny fanahin' ny olona maty ka ny andriamanitra Plotô no mpanapaka ao. Ny fiainan-tsi-hita na ny fitoeran' ny maty na ny fanjakan' ny maty ao amin' ny fedrà grika dia atao hoe fanjakan' i Hadesy na Hadesy. Toerana any ambanin' ny tany izany izay anjakan' ilay andriamanitra atao hoe Hadesy, ka izany no ilazana izany toerana izany hoe "fanjakan' i Hadesy". Ny Hadesy ao amin' ny fedrà grika dia tsy mitovy amin' ny an' ny fivavahana kristiana. Amin' ny teny grika dia ᾍδης / Hádēs na Ἅιδης / Háidēs no iantsoana ny Hadesy. Ny Rômana dia manao amin' ny teny latina ny Hadesy hoe Inferni.
Fiainan-tsi-hita ao amin' ny jodaismaModifier
Ny fiainan-tsi-hita na ny fitoeran' ny maty na ny fanjakan' ny maty ao amin' ny fivavahana jiosy dia atao hoe Seôla na Seôly (amin' ny teny hebreo dia atao hoe שאול / Sheol). Izany dia tsy inona fa ny ny fasana iraisan' ny olombelona rehetra. Ny Baiboly hebreo dia manoritsoritra azy ho sahala amin' ny toerana tsy misy fahafinaretana izay itoeran' ny olona rehetra, na marina na meloka, na mpanjaka na andevo, na tia vavaka na tsy mivavaka, mba hitioerany amim-pahanginana sy hiandrasany ny fiverenany ho vovoka. Tsy izany anefa no iafaran' ny olombelona fa misy ny hovoavonjy avy ao amin' ny Seôla, araka ny lahatsoratra sasany, toy ny hita ao amin' ny Bokin' ny Salamo (Sal. 86.13) sy ny hafa koa.
Fiainan-tsi-hita ao amin' ny fivavahana kristianaModifier
Mampiasa ny teny hoe Hades ny Testamenta Vaovao amin' ny teny grika hanondroany ny fonenana na ny toetran' ny maty. Amin' ny andalan-tsoratra sasany dia toa maneho toerana sady tsy soa tsy ratsy izay iandrasan' ny maty ny fahafatesana, ny fandevenana, ary ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty ny Hadesy. Maro ny andalana ao amin' ny Testamenta Vaovao no azo anatsoahana hevitra fa nidina tany amin' izany fanjakan' ny maty izany i Kristy, mba hitondra ny olo-marina ho any any amin' ny Lanitra na noho ny antony hafa, arakaraka ny fivoasana teôlôjika. Misy andalana hafa ao amin' ny Testamenta Vaovao izay azo anatsoahana hevitra fa toeram-pijaliana ho an' ireo olon-tsy marina ny helo, ka izany dia mitarika ho amin' ny fiheverana fa mety misaraka roa miavaka tsara izany toerana izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiainan-tsi-hita&oldid=1013448"
Dernière modification le 8 Aogositra 2021, à 11:17
Voaova farany tamin'ny 8 Aogositra 2021 amin'ny 11:17 ity pejy ity.